सुनको मूल्य ह्यात्तै घट्यो, कतिले भएको छ कारोबार ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
काठमाडौं– साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ रु ५०० घटेर कारोबार भएको छ। शुक्रबार तोलामा ६५ हजारमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ आइतबार घटेर ६४ हजार ५०० मा कारोबार भएको हो । यस्तै तेजावी सुन ६४ हजार २०० कारोबार भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेपछि नेपालमा पनि यसले असार ६ गते इतिहासमै पहिलोपल्ट ६५ हजार रुपैयाँ प्रतितोलाको नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो।
ठूला शक्ति राष्ट्रहरुका बीचमा तनाब देखिएपछि सुनको मूल्य बढेको नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका पूर्वाध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताएका थिए। सो तनाब नसुल्झिएकाले सुनको मूल्यमा खासै गिरावट आउन नसकेको ब्यवसायीहरु बचाउँछन्।
यस्तै चाँदी आइतबार तोलामा रु ७२० मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । यसअघि चाँदी तोलामा ७३० मा कारोबार भएको थियो ।
क्याणडाको उच्च बेबी ब्राण्ड ब्बलुभ अब नेपालमा
ललितपुरको खोकनामा एनबी बैंकको शाखा